PSG Iyo Chelsea Oo U Gudbay Semi-finalka Iyagoo Laga Badiyey, Munich Oo Fursadaheedii Iska Khasaarisay & Rikoodh Laga Jabiyey Blues - Laacib
HomeWararka Champions LeaguePSG Iyo Chelsea Oo U Gudbay Semi-finalka Iyagoo Laga Badiyey, Munich Oo Fursadaheedii Iska Khasaarisay & Rikoodh Laga Jabiyey Blues
PSG Iyo Chelsea Oo U Gudbay Semi-finalka Iyagoo Laga Badiyey, Munich Oo Fursadaheedii Iska Khasaarisay & Rikoodh Laga Jabiyey Blues
April 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Kooxda kubadda cagta Chelsea iyo PSG ayaa u gudbtay semi-finalka tartanka Champions League, kaddib kulamo adkaa oo labadoodba laga badiyey.
Kooxda reer France ayaa lagaga badiyey 1-0 kulan uu fursado badan khasaariyey Neymar, sidoo kalena ay Bayern iska lumisay fursado badan dhamaadkii ciyaarta, waxaana natiijada labada kooxood ee cel-celiska labada kulan ay ku dhamaadeen 3-3, hase yeeshee PSG oo garoonka martida kusoo dhalisay saddex gool ayaa u gudubtay wareegga xiga.
Blues ayaa shaqada ugu badan sii qabsatay lugtii hore oo ay 2-0 ku badisay, waxaana ay ciyaartan kaliya u baahnayd in ay goolkeeda ilaashato, amaba aan laga dhalinin wax ka badan hal gool.
Ben Chilwell iyo Mason Mount ayaa goolasha u dhaliyey ciyaartii hore, waxaanay sii sugaysaa oo ay semi-finalka la ciyaari doontaa Real Madrid iyo Liverpool midkooda soo gudba habeen dambe.
Chelsea ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigaysay tartanka Champions League, iyagoo aan halmarna laga badinin, waxaana sagaalkii ciyaarood ee hore ay soo badiyeen toddoba ka mid ah, labada kalena waxay soo galeen barbarro.
In laga badiyo kulan Champions League ah, waxa ugu dambaysay Xilli ciyaareedkii 2017-18 oo ay Liverpool ku garaacday, waxaana 11kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee wareegyada isreeb-reebka ee lugta hore ay soo badiyeen ay wareegga xiga u gudbeen siddeed ka mid ah.
Tababare Thomas Tuchel ayaa ciyaartan kusoo bilaabay xiddigo khibrad u leh tartankan, sida Thiago Silva oo uu kusoo celiyey safkiisa difaaca, halka uu afka horena dhigay Pulisic iyo Kai Havertz oo uu kaalmaynayey Mason Mount oo ahaa laacibkii goolka quruxda badan hoggaanka ugu dhiibay ciyaartii hore.
Ciyaartan oo qaybteedii hore ay firfircooni badan lahayd FC Porto ayaa waxay Chelsea heshay laba fursadood oo ay ugu dhowaatay in ay gool dhaliso, hase yeeshee waxay kusoo kala baxeen barbarro goolal la’aan ah.
Qaybtii dambe ayay Chelsea maamulka ciyaarta daadihinaysay, waxaana kubbad ay wada daadihinayeen N’Golo Kante iyo Mount ay mar kale ugu dhowaadeen in ay gool u beddelaan, ka hor intii aanay fursad kale oo loo qaatay in ay gool tahay aanu helin Mount, taas oo iyadana ay lumiyeen.
Waqtigii dheeraadka ahaa ee lagu daray ciyaarta ayay FC Porto heshay gool uu u saxeexay laacibkooda ganaaxa kasoo noqday ee Taremi, waxaanay ciyaartoodu kusoo dhamaatay 1-0, laakiin celceliska labada lugood ayaa ka dhigan in Chelsea ay kusoo baxday 2-1.
Rikoodhkii guul-darro la’aanta Chelsea ee Champions League ee xilli ciyaareedkan ayaa waxa uu kusoo dhamaaday Porto oo goolka ay waqtigii dhamaadka ka dhalisay uu soo afjaray rikoodhkaas.
Dhinaca kale, PSG ayaa usoo gudubtay wareegga semi-finalka inkasta oo ay Bayern Munich kaga badisay 1-0.
Labada kooxood ayaa helay fursado badan oo goolal loo qaatay, waxaana ku badnayd PSG oo afar fursadood oo dhamaantood goolal loo qaatay uu lumiyey Neymar Jr.
Xiddiga reer Brazil ayaa laba jeer birta ka jaray kubadda, waxaana uu sidoo kale goolhayuhu ka qabtay kubbad kale, ka hor intii aanu lugta la seegin kubbad uu goolka u hor-dhigay Angel di Maria.
Neymar ayaa sidoo kale dhamaadkii khasaariyey fursad dahabi ah markaas oo kubbad uu la dhex-orday difaaca Munich laga gujiyey.
Kylian Mbappe ayaa gool u dhaliyey PSG, laakiin markii uu bilaabay dabbaal-degga waxa uu arkay calanka oo ka taagan dhinaca.
Bayern Munich ayaa iyaduna goolkeeda heshay qaybta hore, waxaana madax ugu dhaliyey Eric Maxim Choupo-Moting.
Leroy Sane ayaa fursado caddaan ah ka lumiyey Bayern Munich, waxaana middii halista ahayd ay ahayd dhamaadkii isagoo kubbad uu u dhiibi karayay saaxiibkii oo cidlo taagnaa xerada ganaaxa dhexdeeda uu go’aansaday in uu isagu goolka ku toogto.
Ciyaartan ayaa kusoo dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday Bayern Munich, waxaanay celceliska labada lugood ay noqotay 3-3, hase yeeshee PSG ayaa soo gudubtay maadaama ay saddex gool kusoo dhalisay garoonka Bayern.
PSG ayaa semi-finalka la ciyaari doonta Manchester City iyo Borussia Dortmund midkooda soo gudba habeen dambe.
Hhh intey 2 iyo 1 ugu badisay baryern